Telerehabilitation yekutaura pathologies mune vakuru - Cognitive Kudzidziswa
Upwere uye kuyaruka
Kutanga typing uye pinda Enter kuti utsvage
Telerehabilitation yekutaura pathologies mune vakuru
Iwe uripano: musha » Articles » Telerehabilitation yekutaura pathologies mune vakuru
Kutaura pathologies ibasa mune ekutaura varapi vanoshanda kazhinji. Iko (kuri kuramba kuchipararira) kushandiswa kwetekinoroji kuwedzera mabasa ekuvandudza kunze kwenzvimbo dzekunze - kubatanidza nyanzvi kune murwere kana nyanzvi dzakasiyana kuita ongororo nemishonga - inonzi tele.
Telerehabilitation inzvimbo ye telemedicine iyo inoshandiswa muUnited States nemadhipatimendi ezvehutano kuvhara musiyano uripo pakati penzvimbo dzakasiyana dzekurapwa kwevanhu vakuru. United States Dhipatimendi Rezvehutano rakabudirira kushandisa telemedicine masevhisi kusimudzira hutano nekubatanidza hunyanzvi hwekurapa nemamiriro akasiyana munzvimbo dzakasiyana dzekumisikidza kuzadzisa mhedzisiro yemurwere mhedzisiro.
Kune nzira dzakasiyana dze telerehabilitation dzinoshandiswa uye dzinosanganisira synchronous uye asynchronous, kure kwevarwere kuongorora uye kushandiswa kwemaapps kusimudzira hutano.
Huwandu hukuru hwemabhuku huripo kutsigira kushandiswa kweterevhizheni mukutarisira kwevakuru varwere; Cochrane kubva muna 2013 mimwe mienzaniso iyo inoshuma kushanda kweye telerehabilitation muvanhu vakatambura sitiroko, uye bhuku ra2015 naMolini nevamwe vaaishanda navo iyo yaiongorora kushandiswa kweterevhizheni masevhisi pakutaurirana uye kumedza kusagadzikana kuratidza zvibereko zvakanakasemuenzaniso chiyero chemutengo-wekubatsira kugadzirisa uye kuwedzera kushanda pamwe nekugutsikana kwemurwere.
Kuti uwedzere ruzivo rwuripo, Kristen naJoneen inoitiswa mu2019 (uye yakaburitswa mu2020) kuongororwa kwakarongeka kwemabhuku esainzi ane chekuita nere-rehabilitation mumasevhisi ane chekuita nematambudziko ekutaura.
Aska ongorora zvine chekuita nekutsvaga kwakaburitswa kubva muna2014 kusvika 2019 pamusoro pevanhu vakuru vane chisingaperi aphasia, kusagadzikana kwakanangana neParkinson's, dysphagia uye yepamberi inofambira mberi aphasia. 31 zvidzidzo zvakasarudzwa nezvinangwa zvinotevera:
Iwe unogona zvakare kufarira: Computerized aphasia pamwe nekugadzirisa. Iko kusanganiswa kwekuziva kwekudzidzira uye kudzidzisa mutauro
Wongorora kushanda pamwe nekubudirira kwevakuru telerehabhabhu mukati memasevhisi evakuru vane hurema hwekutaura.
Ongorora zvakadzama marapirwo ari kure anotarisirwa kuti uwane ruzivo nezvevashandi vanobatanidzwa, zvishandiso uye marongero anoshandiswa (semuenzaniso, kumba kana kure pakati pemakiriniki akasiyana).
Mukutsvaga kwakatariswa, varapi vekutaura vakataurirana nevarwere vachishandisa videoconferencing vachishandisa software yekutengesa (Skype, Zoom, nezvimwewo) uye software yekutsvagisa yakagadziriswa, nepo zvishandiso zvaisanganisira makomputa, mapiritsi uye nehurongwa hwese hwetereconferencing.
Mhedzisiro yeiyi yakarongeka ongororo inoenderera ichitsigira fungidziro yechinyorwa chino, iko kukodzera kweterevhizheni yekurapa kusagadzikana kwekutaura mumurwere mukuru. Vanyori vanowana humbowo hwekushanda uye kushanda kwetsika yekuvandudza terevhizheni, kunyanya mune inowirirana maitiro uye vhidhiyooconferencing; masevhisi akaitwa ari kure kudzimba dzevarwere aratidza mhedzisiro yakanaka nekuda kwekushandisa mune yakasarudzika nharaunda yekutaurirana kupfuura mumakiriniki.
Mukupedzisa, iyo yakatsanangurwa yakagadzirirwa se munda unobuda uye uri kusimukira wekurapa kwekutaura, asi mapurojekiti akasimba ekutsvagisa achiri kudiwa, kusanganisira kushandiswa kweongororo yekuyedza kudzora akasiyana siyana, kunyatso kuona kushanda kwemasevhizheni ekugadzirisa. Pamusoro pezvo, kutsvagurudza mune ramangwana kunogona kujekesa basa nekukanganisa kwevanopa rubatsiro rwehutano vari kure, kuvabatsira kuti vape rubatsiro rwakanakisa rwehunyanzvi kana hunoshanda kuvarwere vavo mukati memasevhisi ekutaura.
Unogona zvakare kuda:
Yedu yemahara zviitiko (zvinofambidzana uye bepa) yeaphasia
Iko kurapwa kwekuverenga kunzwisisika muaphasia
Kubudirira kwetekinoroji nyowani pakurapa kwepashure-sitiroko anomalies
Kutaura kwekurapa kwepashure-sitiroko aphasia: inobatsira here?
Aphasia uye komputa-terevhizheni. Iko kusanganiswa kwekuziva kwekudzidzira uye kudzidziswa mutauro
Re-gonesa kunyora uchishandisa… WhatsApp
Aphasia - CIAT vs M-MAT: ndeipi iri nani?
Iwe unogona zvakare kufarira: Aphasia: kuvakwa kwechirevo (chikamu 2: kuvandudza)
Zvishandiso zvedu zveaphasia
Zvese zviridzwa zvedu zvinogona kushandiswa mahara pamhepo. Kushandisa webhu-apps kunyange zvisina basa pane yako pc uye kutsigira basa redu zvinogoneka download aphasia KIT. Ichi chiunganidzwa chine mashanu ewebhu-maapps (Nyora izwi, kunzwisisika kweLexical, Kutumidza mazita, Kuziva syllables uye Tafura yemashiripiti) kuti ishandiswe paPC uye anopfuura anopfuura chiuru mapeji emakadhi ane zviitiko zvekudhinda, matafura ekutaurirana uye zvakasiyana zvinhu.
Isu takagadzirawo matatu makuru ekuunganidza ezviitiko pane mutauro wePPP wakakamurwa nenzvimbo:
Kuvaka mitsara: makadhi makumi matatu nemashanu
Lexicon uye semantics: makadhi zana nemakumi mashanu
Syllables uye metaphonology: 160 zvinyorwa
Zvezvinyorwa zvinyorwa paaphasia unogona kushanyira dura redu.
Weidner, K., & Lowman, J. (2020). Telepractice yevakuru kutaura-mutauro pathology masevhisi: yakarongeka kuongorora. Maonero eASHA Anokosha Mapoka, 5(1), 326-338.
Laver, KE, Adey - Wakeling, Z., Crotty, M., Lannin, NA, George, S., & Sherrington, C. (2020). Telerehabilitation services ye stroke. Cochrane Database yekuongorora kwakarongeka, (1).
Regina Molini-Avejonas, D., Rondon-Melo, S., de La Higuera Amato, CA, & Samelli, AG (2015). Kuongorora kwakarongeka kwekushandiswa kweterehealth mukutaura, mutauro uye nesainzi yekunzwa. Zvinyorwa zve telemedicine uye telecare, 21(7), 367-376.
aphasia, aphasia uye telerehabilitation, Therapy Therapy uye telerehabilitation
Telerehabilitation yekutaura pathologies mune vakuru2020-09-132020-09-21http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/09/la-teleriabilitazione-per-le-patologie-del-linguaggio-negli-adulti.jpg200px200px
Anobata neuropsychology mukusimudzira, vanhu vakuru uye vasina makore zera. Parizvino anoshanda mumapurojekiti akati wandei nezvekucherechedzwa kwezvinhu mune zvimwe zvirwere zvehutachiona.
Via Ugo Bassi, gumi
VAT kwete.: 12727841004
VAT kwete.: 03350991208
Iri basa rinogoverwa pasi pezenisi Creative Commons Attribution - Isiri yekutengeserana - Hapana inobvisa mabasa.
Copyright Copyright © All Rights Reserved © 2020
Iyi webhusaiti inoshandisa makuki kuvandudza ruzivo rwako paunenge uchitsvaga kuburikidza newebhusaiti. Kunze kwemakuki aya, makuki akaiswa mumapoka sezvakakosha anochengeterwa mubhurawuza rako sezvo iwo akakosha pakushanda kwekutanga kwewebhu webhusaiti. Isu tinoshandisawo matatu-bato makuki anotibatsira kuongorora uye kunzwisisa mashandisiro aunoita webhusaiti ino. Aya makuki achachengetwa mubrowser yako chete nekutendera kwako. Iwe zvakare une sarudzo yekusarudza kubuda pamakuki aya. Asi kubuda mune mamwe emakuki aya kunogona kukanganisa maitiro ako ekubhurawuza.
Inogadziriswa nguva dzose
Iko kurapwa kwekuverenga kunzwisisika muaphasiaAphasia, Zvinyorwa
Iyo semantic kusagadzikana muvakuru: dzidziso uye yemahara kurovedza muviriAphasia, Mutauro